Iwo mamaneja emukati. Yakavhurika yakavhurwa sosi hutungamiriri. | Linux Vakapindwa muropa
Diego ChiGerman Gonzalez | | General, Noticias, Free Software
Zvemukati mamaneja emawebhusaiti ndeimwe yenzira dzakakurumbira nzira nekuti ivo vanochengetedza dhizaini, kugadzirisa uye manejimendi nguva. Ruoko ruoko neWordPress, yakavhurwa sosi zvikumbiro zvinotonga zvakanyanya. Nekudaro, mhinduro dzenhumbu dzinowanikwa nevamwe vanopa vanogamuchira vari kuwedzera nzvimbo.
1 Zvemukati mamaneja nenhamba yemasaiti anoishandisa
2 Mhando dzemhinduro
3 Iwo matatu akavhurwa sosi maneja pane irwo runyorwa
Zvemukati mamaneja nenhamba yemasaiti anoishandisa
Kutarisa kuhuwandu kunoratidza izvo Unenge huremu hwese hwehutungamiriri hunotakurwa neWordPress:
WordPress (Vhura Sosi): 27.000.000
Wix (Yakavanzika): 3.800.000
Squarespace (Yakavanzika): 2.200.000
Joomla! (Vhura sosi): 1.500.000
Shopify (Yakavanzika): 1.400.000
Kufambira Mberi Sitefinity (Yakavanzika): 1.400.000
GoDaddy Webhusaiti Inovaka (Yakavanzika): 1.200.000
Weebly (Yakavanzika): 935.000
Drupal (Vhura Sosi): 562.000
Blogger (Yakavanzika): 459.000
Pano tine mhando mbiri dzekugadzirisa; izvo zvakazvimiririra kune wekutambira mupi uye izvo zvinopihwa neumwe neumwe wavo. Muchokwadi WordPress inowira mumapoka ese ari maviri. Automattic, ruoko rwekutengesa rweiyo projekiti, ine yayo yega yekutambira sevhisi iyo inokwikwidza neWix uye imwe nzira dzekudyidzana. Asi, maneja wezvemukati anogona kutorwa pasi uye kuiswa mumupi wesarudzo yako.
Chaizvoizvo, vazhinji vanopa vanopa zvirongwa neWordPress, Drupal kana Joomla! yatove kuiswa saka haufanire kutora dambudziko rekuisa mafaera uye kugadzirisa iyo database.
Vavaki vewebhusaiti vanobatana nevanopa vanopa vanoita kuti zvive nyore, asi kana iwe ukafunga kufambisa saiti yako, uchafanira kuivaka kubva pakutanga. Panzvimbo peiyo neWordPress, Drupal naJoomla! zviri nyore kwazvo kuita kutama.
Iwo matatu akavhurwa sosi maneja pane irwo runyorwa
Kuzivikanwa kwe WordPress semaneja zvemukati zvakanyatsokodzera. Izvo hazvina basa kuti iwe hauna ruzivo rwewebhu dhizaini kana sevha yekumisikidza, nekuda kwema automated wizard ayo mazhinji anotambira vanopa anosanganisira uye eneti mamenyu eiyo WordPress pachezvayo, unogona kuve neyako blog kana webhusaiti yakagadzirira kushandisa muawa.
Ne WordPress iwe unogona kuita chero chinhu chinga gadziriswe uchishandisa PHP. Izvi zvinosanganisira e-commerce zvitoro, mablog, maforamu, mapeji emasangano, kurodha masosi. Iyo ine yakasarudzika sarudzo yemisoro yekugadzirisa kutaridzika kwayo uye mawedzero-ekuwedzera mashandiro ayo uye kubatanidza saiti pamwe newebhu masevhisi uye masocial network.
Iyo inogadzirisawo nyaya senge yekutsvaga injini optimization uye yakawanda-chishandiso kuona.
Tataura izvozvo, ngatitangei kune zvakashata. Sezvo nemishonga, ivo vanokupa yakakwana yemahara zvinhu kuti iwe ufare, asi kana iwe uchida iwo anotonhorera maficha iwe unofanirwa kutendeukira kune akabhadharwa ekuwedzera-maatimu uye madingindira.
Uye zvakare, kune akawanda uye akasununguka madingindira anomanikidza iwe kuisa ekuwedzera-ons anounganidza uye anotora nzvimbo pane server.
Kune rimwe divi, mukurumbira weWordPress urikutamba uchipesana naro uye uyezve uye akawanda masosi anoshandisa iyo anotambura nekurwiswa ne spam uye kuita phishing. Parizvino vagadziri vakanyatsoteerera uye sekureba sekunge iwe uine zvekuchengetedza zvekuchengetedza kusvika parizvino uchave nematambudziko kwatiri.
Ini pachangu, mushure mekuishandisa kwemakore mapfumbamwe, ndiri kuneta uye kufunga dzimwe nzira senge static nzvimbo. Ini ndinonzwa kuti ndiri kupira nguva uye kuita zvakasiyana-siyana ndichiitira nyore kushandisa. Asi, kana iwe uchida webhusaiti nekukurumidza, kana usingakwanise kutora nguva yekuzvichengeta, ichiri yako yakanyanya kunaka sarudzo.
Kunyangwe isina mukurumbira weWordPress, Joomla! iyo sarudzo yakakodzera kufunga nezvayo. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti ine rakadzikama kwazvo rekufunda curve, asi, kana iwe ukatora dambudziko kuti udzidze kuishandisa, uyu wemukati maneja anokupindura iwe. Iyo chirongwa chakanyatso nyorwa uye iwe unogona zvakare kuenda kumaforamu ekubatsira.
Joomla! Iyo ine yakafara assortment yekuwedzera uye matemplate ayo anokutendera iwe kuti uwedzere mashandiro ayo uye kugadzirisa maitiro ayo kutaridzika.
Drupal inopa zvakafanana mabasa seWordPress uye Joomla! kana zvasvika mukugadzira zvirinani mawebhusaiti, zvichivaita kuti vateerere uye vagadziriswe enjini dzekutsvaga. Kufanana navo, unogona kuwedzera plugins uye madingindira. PAsi iko kwazvinotora mukana wavo ndiko kwayo kwakasimba multisite rutsigiro. Mune mamwe mazwi, nekumisikidza kumwe chete unogona kubata akawanda mawebhusaiti.
Kunyangwe iri yemahara uye inogona kushandiswa kune mawebhusaiti kana blog, simba rayo inzvimbo dzemakambani.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Iwo mamaneja emukati. Yakavhurika yakavhurwa sosi hutungamiriri.
Snapdrop, nyowani "AirDrop" yeiyo bhurawuza, saSharedrop, haina kunaka seyaApple